Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.5.6 Final ဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျ
ဤသူ5ယေဘုယျဒီဇိုင်းအခြေခံမူများအပြင်၌ငါသည်အကွံဉာဏျနှစျဦးသည်အခြားအပိုင်းပိုင်းဆက်ကပ်ချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုအဆိုပြုတဲ့အခါသင်ကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုက "ဘယ်သူမှပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ " ဟုတ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်အံ့သောငှါ။ တကယ်တော့ပါဝင်မှုမရှိခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကန့်ကွက်များသောအားဖြင့်မှားလမ်းအတွက်အခြေအနေကိုစဉ်းစားမှပျေါပေါကျလာ။ လူအတော်များများဟာမိမိတို့ကိုယ်နှင့်အတူစတင်ထွက်အလုပ်လုပ်: "ငါအလုပ်များတယ်, ငါပြုပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအခါငါကပြုပါလိမ့်မယ်လို့မည်သူမဆိုမသိရပါဘူး။ အဲဒီအစားကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူစတင်ထွက်အလုပ်လုပ်ဒီတော့ဘယ်သူမှကြောင်းပြုပါလိမ့်မယ်။ "သို့သော်သင်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်လူမျိုး၏တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေနှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ သာ 1-in-a-သန်းသည်ဤလူမျိုး၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုလျှင်, ထို့နောက်သင့်စီမံကိန်းကိုအောင်မြင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သာ 1-in-a-ဘီလီယံကိုလူပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှင်, သင်၏စီမံကိန်းဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးပျက်ကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ် in-a-သန်းတတ-In-တစ်ဘီလျံအကြားကွဲပြားခြားနားသွားမှာမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ကတည်​​းကကျနော်တို့ကစီမံကိန်းများကိုလုံလောက်ပါဝင်မှု generate လျှင်သိရန်အလွန်ခဲယဉ်းကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည်။
ဒီတစ်နည်းနည်းပိုပြီးကွန်ကရစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ၏ Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံ, အစောပိုင်းကဤအခနျးတှငျဆှေးနှေးလူ့တွက်ချက်မှုနက္ခတ္တဗေဒစီမံကိန်းကိုထံသို့ပြန်လာကြကုန်အံ့။ ကီဗင် Schawinski နဲ့ Chris Linton, က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံစဉ်းစားအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှာအရက်ဆိုင်၌ထိုင်နှစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဆိုပါစို့။ သူတို့ကခန့်မှန်း-နှင့်ကြပါပြီဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမှန်းဆ-ကြောင်းနိုင် Puerto တှငျနထေိုငျသူအ of2Aida Berg-နေ-မှာ-အိမ်မှာမိခင်နဂါးငွေ့တန်းရာပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ရှိတာလေးတွေတက်အဆုံးသတ်ရီ-မည်ဖြစ်ကြောင်း (Masters 2009) ။ သို့မဟုတ်, ဒါဝိဒ်သည် Baker က Foldit ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆီယက်တဲလ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ဇီဝဓာတုပညာရှင်၏ဖြစ်ရပ်စဉ်းစားပါ။ သူက McKinney မှတစ်စုံတစ်ဦး, တက္ကဆက်ပြည်နယ်တစ်ခုအဆို့ရှင်စက်ရုံတစ်ခုဝယ်အဖြစ်နေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့သူအ Zaccanelli, Foldit အပေါ်တစ်ဦးအရေအတွက်6အဆင့်မှမြင့်တက်နောက်ဆုံးမှာ, ပရိုတိန်းခေါက်သည်မိမိညနေပိုင်းသုံးဖြုန်းနှင့် Zaccaenlli ကြောင်းမယ်လို့ဖြစ်သူ Scott "ဖိနပ်" အမည်ရှိကြောင့်မျှော်လင့်ခဲ့ကြဘယ်တော့မှနိုင် , ဂိမ်းမှတဆင့် Baker နှင့်သူ၏အုပ်စုဒါကြောင့်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ synthesize ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကတိပေးတွေ့သော fibronectin ၏တစ်ဦးထက်ပိုတည်ငြိမ်တဲ့မူကွဲများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုတင်ပြမယ်လို့ (Hand 2010) ။ ဟုတ်ပါတယ်, Aida Berg နှင့် Scott Zaccanelli atypical သော်လည်း, သောအငျတာနကျ၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏: လူပေါင်းများစွာနှင့်က atypical ရှာတွေ့မှပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခန့်မှန်းနှင့်အတူဤအခက်အခဲပေးထားငါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုဖန်တီးခြင်းအန္တရာယ်များဖြစ်နိုငျကွောငျးသငျသညျသတိပေးချင်ပါတယ်။ သငျသညျဘယ်သူမှအသုံးပြုချင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်အားထုတ်မှုတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်အ MacArthur ဖောင်ဒေးရှင်းကနေ $ 250,000 တစ်ထောက်ပံ့ငွေနှင့်အတူလက်နက်ကို virtual ကမ္ဘာ၏ဘောဂဗေဒ၏လယ်ပြင်တွင်, Edward က Castronova-ဦးဆောင်သုတေသီနှင့်သောသူအတွင်းတစ်ဦးကို virtual ကမ္ဘာတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေနီးပါးနှစ်နှစ်ကြာအောင် developer များ-အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထောက်ခံ စီးပွားရေးအရစမ်းသပ်ချက်ကျင်းပနိုင်။ အဆုံး၌, တပြင်လုံးကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုပျက်ကွက်ခဲ့; ဘယ်သူမှ Castonova ရဲ့ virtual world ကိုသုံးချင်တယ် (Baker 2008) ။
ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲသောပါဝင်မှု, ပတ်သက်. မသေချာမရေရာပေးထား, သင်တို့ကိုငါပိန် Start-up နည်းစနစ်ကိုသုံးရန်ကြိုးစားသောအကြံပြု (Blank 2013) : Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးရိုးရှင်းတဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတည်ဆောက်နှင့်သင်အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှေ့တော်၌ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုသရုပ်ပြနိုင်လျှင်မြင်ရ ထုံးစံ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏။ တစ်နည်း၌သင်တို့ကိုလေယာဉ်မှူးကစမ်းသပ်စတင်သောအခါ, သင်၏စီမံကိန်းမနှင့်လိမ့်မည်က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံသို့မဟုတ် eBird သကဲ့သို့ပွတ်-ကြည့်ရှုသင့်ပါဘူး။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေ, သူတို့ကယခုကဲ့သို့, ကြီးမားသင်းအားဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနှစ်၏ရလဒ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ သင်၏စီမံကိန်းပျက်ကွက်နှင့်သောသင်တို့၌အစာရှောင်ကျရှုံးချင်နေတဲ့ Real-ထို့နောက်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်သွားလျှင်။